Etu esi ahapụta ụgbọ ibu azụmahịa gị ịhapụ Mgbasa Ozi Email | Martech Zone
Friday, May 6, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
O doro anya na ị na-arụpụta ma na-arụ ọrụ dị irè ụgbọ ibu azụmahịa gbahapụrụ email mkpọsa ọrụ. N'ezie, ihe karịrị 10% nke ozi ịntanetị gbahapụrụ agbahapụ meghere, pịa. Ma ọnụ ahịa ego nke ịzụta site na ozi ịntanetị ịhapụ ụgbọ bụ 15% dị elu karịa ịzụrụ ihe mbụ. I nweghi ike ịtụle ebumnuche karịa karịa onye ọbịa na saịtị gị na-agbakwunye otu ihe n'ụgbọ ahịa gị!
Dị ka ndị na-ere ahịa, ọ dịghị ihe na-enye obi mgbu karịa ịhụ mbata nke ndị ọbịa na webụsaịtị ecommerce gị - itinye oge ọpụrụiche, na-agbakwunye ihe dị n'ụgbọala ha ma gbahapụ ya tupu ịmalite usoro ire ere. Ya mere, gịnị ka nke ahụ pụtara? Ha na-ebipu aha gị ruo mgbe ebighi ebi? Ikekwe! Ihe ị ga - eme bụ ịgbalịsi ike ịkwado ha ma mee ka ha mata na ha dị mkpa.
Ihe omuma ihe omuma a sitere na ndi mọnk Email na akowaputa omume nke ndi na ere ahia ahia ahia, akparamaagwa nke azumazu azumazu ahia na mmeri mmeri, ma kwuputa uzo nke 7 iji hazie ngwa ahia izuputara ahia.
Oge na ugboro ole okwu - N’ime nkeji 60 ịhapụ, ikwesiri izipu ozi izizi. Ekwesịrị izipu email nke abụọ n'ime awa 24. A ga-ezigakwa email nke atọ n'ime ụbọchị atọ ruo ụbọchị ise. Izipu ozi ịntanetị gbahapụrụ atọ na-ebute ihe $ 5 laghachi na ntinye ego.
Tụlee Mbupu n'efu - Na-anwale ndị na-azụ ahịa hapụrụ gị na onyinye, ma ọ bụ mbelata ma ọ bụ mbupu n'efu. Nnyocha na-egosi na mbupu n'efu nwere ike ịdị okpukpu abụọ karịa otu pasent.
Were onyinye a na - apụghị ịgbagha agbagha nwaa ha - Nnyocha egosiwo na email agbahapụ nke nwere onyinye ego nke 5% -10% na nzụta mbụ nwere ike inyere aka ịhapụ ọnụego gị.
Ngosipụta Ngwaahịa Ngwaahịa - Ngwa nyocha anya na-ekpughe na gụnyere foto nke ngwaahịa a gbahapụrụ agbahapụ kama naanị njikọ ngwaahịa na igbe ịhapụ ozi email na-elebara anya karịa nke ahụ na-enweghị.
Crossre Ere Egwu adighi nma - Obe ịre ndị na-ere ngwaahịa ngwaahịa a nwekwara ike bụrụ ngọzi kachasị maka azụmaahịa gị. Gosiputa uzo ozo di nkpa na ndi kacha ere ahia.
Hazie ozi ịntanetị ịhapụ - Jiri usoro ihe nchọgharị nke ndị ọbịa na ịzụrụ ihe gara aga iji mee ka onyinye ahaziri iche.
Kpebie ajụjụ - Ozi ịntanetị gbahapụrụ agbasapụ nwere ike inyere aka dozie ajụjụ nke ndị gbahapụrụ - inye ha ozi zuru oke ma nyere ha aka ịme mkpebi ịzụta. Nye ndị na-azụ gị nhọrọ zuru oke iji nyere ha aka ịbịakwute gị ma dozie ajụjụ ha.
Di na nwunye ahia gi gbasaa mgbasa ozi email site na ichogharia mgbasa ozi na uzo di iche iche iji mee ka ha nwekwuo mmeri nke ndi n'agha.
Tags: ịgbahapụagbahapụ agbahapụozi ịntanetị gbahapụrụ agbahapụntinye egoemail ecommerceemail ị gbahapụ agbahapụemail ctaonyinye ego emailndị mọnk emailmbupu n'efuotutu ọware-ezubere iche
Etu esi ede akwukwo ndi n’eme ka ndi obia tinye aka